15/01/2018 - 15:00 : ONIVERSITE ANTANANARIVO: Tonga teny an-toerana ny tompon’andraikitra ny ministeran’ny fampiananrana ambony, ka hivoaka rahampitso ny lisitry ny fandoavana ny vatsim-pianaran’ny mpianatra eny Ankatso.
Archive du 20170713
Praiminisitra Solonandrasana Miandry azy ny fitsarana
Andro sisa isaina amin’ny hitazonan’i Mahafaly Solonandrasana Olivier ny toerana maha praiminisitra azy, raha ny resaka mifamoivoy any an-dapa any.
Alphonse Randrianambinina Tany tsy misy fanjakana eto Madagasikara
Azo ambara fa tany tsy misy fanjakana ny eto Madagasikara ankehitriny, hoy ny filoha lefitra nasionalin’ny antoko Leader Fanilo tarihan’Atoa Rabesa Zafera Antoine.
Ramatahora ataon’ny fanjakana Niaka-pofona ny MAPAR
Tonga nitsidika sy nankahery an’i Rossy teny Mahamasina noho ny fahamaizan’ny fitaovana fanamafisam-peon’ny Kianjan’ny Kanto ny vondrona Mapar omaly notarihan’ny filoha lefitra Augustin Andriamananoro sy ireo solombavambahoaka Mapar tahaka an’i Christine Razanamahasoa,
Mpiasan’ny Jirama Manahy ny hoaviny
Mitsangana indray ny sendikan’ny mpiasa eo anivon’ny Jirama mivondrona ao anatin’ny « inter-syndical », ka hisy ny fihaonana hataon’ny mpiasa eny amin’ny sekoly Sainte Famille Mahamasina ny sabotsy izao.
Fisolokiana sy fibodoana trano sy tany Zanaka jeneraly no atidoha
Misy vondron’olona manao asa fisolokiana goavana efa ho herintaona mahery izay ao amin'ny fitsarana Anosy, raha ny vaovao mivoaka.
Harem-pirenena sarona tato ho ato Tsy misy ambadika fa tena vokatry ny asa
Nanao antso amin’ireo mbola mikasa hanondrana harem-pirenena an-tsokosoko taorian’ny nahatrarana ireo vaingam-bolamena miisa 31 teny amin’ny seranam-piaramanidin’Ivato
Fiparitahan’ny fako eto an-drenivohitra Manana vahaolana ny GREEN N KOOL
Fikambanana iray niorina tamin’ny taona 2016 miady amin’ny fiparitahan’ny fako eto an-drenivohitra ny Green N Kool.
Afrobasket 2017 CAN U 16 Fantatra ireo 12 lahy voafidy ho atsy Maorisy
Nambaran’ny federasiona Malagasin’ny taranja basikety baolina notarihan’ny filohany Ramaroson Jean Michel,
Mbola ho lavitra ny lalana.
Ny an-daniny mangeja, ny an-kilany mandrangitra, misy koa ny miandry kendritohana, hoy ny fanehoan-kevitra iray izay mahita ny fiainantsika eto amin’izao fotoana.
Sekolim-panjakana Horarana ny fanaovana “cours”
Tao anatin’ny taona maro, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena,
Voka-panadinana BEPC Antananarivo Nihena ho 48,04 % ny salam-pahafahana
Nivoaka omaly ny voka-panadinana BEPC ho an’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra. Nihena ho 48,04 % izany raha nahatratra 52 % tamin’ny taon-dasa.
Minisiteran’ny kolontsaina Mikarakara tolo-tanana ho an’i Haingo Poeta
Miharatsy hatrany ny toe-pahasalaman’i Haingo Poeta na Razafiharijaona Haingo Michel. Antony nanosika ny minisiteran’ny kolontsaina amin’ny
Tena karohina tokoa i Barry Benson, ilay mpanakanto mpanao “slam”, izay nanao dika mitovin’ilay olona nifampiresaka tamin’ny finday tamin’i Claudine Razaimamonjy tao anatin’ny fandaharana «